Umgangatho weGolide woThengiso loMxholo | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 8, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
I-Newsreach ikhuphe zombini kwi-infographic kunye nephepha elimhlophe elihamba kunye, Ixabiso eliQinisekileyo lokuThengisa uMxholo.
Iziqwenga zomntu ngamnye ezikumgangatho ophezulu ziyakwazi ukutsala kunye nokubandakanya abasebenzisi bewebhu, kodwa bebodwa abayi kuba nefuthe olifunayo. Umxholo wentengiso ufuna umzamo oqhubekayo wokuvelisa iziqwenga ezifanelekileyo, ezikumgangatho ophezulu ezifanelekileyo. Amashishini amaninzi ajongene nemiceli mngeni ekuveliseni ivolumu kunye nolwahlulo lomxholo ofunekayo, kulapho iarhente yokuThengisa isiQinisekiso inendima yayo. Njengakwinkqubo yemveliso yegolide, izandla zobungcali ziyafuneka kuwo onke amanqanaba ukuze kuveliswe eyona mveliso igqityiweyo esemgangathweni.
Inani elinye kule infographic kufuneka libe kukuvula amehlo kwabantu abakholelwa ukuba ukukhangela kufuneka kuyekwe ngokupheleleyo: 27 million iziqwenga zomxholo kwabelwana ngazo kwimidiya yoluntu. Oku kuseyinto encinci xa kuthelekiswa ne- 131 billion ukukhangela okwenziwe kumxholo ngosuku ngalunye. Siyakholelwa ukuba ukukhangela kusisiseko… kodwa umxholo omkhulu uya kuthi ekugqibeleni ube nefuthe kwiziphumo zakho zophando ngenxa yeempembelelo ezikhulayo kwezentlalo kubuchwephesha benjini yokukhangela. Musa shiya i-SEO ngokupheleleyo… Kodwa gxila kumxholo omkhulu kunye nokukhuthaza umxholo ngaphambi kokuba ukhathazeke ngokufaka amagama aphambili okanye ukubuyela umva!
tags: UkuThengiswa kweMpahlaubuchule bokuthengisa umxholokwi-infographic
Meyi 10, 2012 kwi-11: 55 AM
Enkosi ngokuthumela uDouglas. Inomdla wokwenyani yokufunda ukuthatha kwakho izibalo.